राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनमा कसले कति सिट जिते ? जित्ने को को छन् (नाम सहित) – Sanghiya Online
राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनमा कसले कति सिट जिते ? जित्ने को को छन् (नाम सहित)
Posted on : February 9, 2018 - No Comment
काठमाडौँ ,माघ २५- राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले ५६ सिट मध्ये एमालेले २५ सिट र माओवादी केन्द्रले ११ सिट गरी ३६ सिट जितेको छ ।
त्यसैगरी कांग्रेसले १३ सिट, संघीय समाजवादी फोरम र राजपाले दुई–दुई सिट जितेका छन । मतदान सकिए लगत्तै अपराह्न देखि मतगणना सुरु भएको थियो । प्रदेश १ मा दलित र अपांग–अल्पसंख्यक कोटामा एमालेका खेमराज नेपाली, अगमप्रसाद बान्तवा राई निर्वाचित भएका छन । प्रदेश १ बाटै एमालेका परशुराम मेघी गुरुङ, हरिचरण रायमाझी, नैनकला ओझा, कांग्रेसका रमेशजंग रायमाझी, सरिता प्रसाईं, माओवादी केन्द्रकी बीना पोखरेल निर्विरोध भएका थिए । सबै विजयीलाई बुधबार साँझ प्रमाणपत्र वितरण गरिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत राजु खतिवडाले जानकारी दिए ।
प्रदेश २ बाट एमालेका सुमनराज प्याकुरेल, कांग्रेसका जितेन्द्र नारायण देव र मुक्ताकुमारी यादव, माओवादी केन्द्रका शशिकला दाहाल, संघीय समाजवादी फोरम नेपालका प्रमिलाकुमारी, रामप्रित पासवान, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका वृषेशचन्द्र लाल र रामप्रसाद यादव निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए । निर्विरोध सबैलाई बुधबार नै विजयी भएको प्रमाणपत्र दिइएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत राधाकृष्ण उप्रेतीले जानकारी दिए।
प्रदेश ३ मा दलिततर्फ एमालेका सिंहबहादुर विश्वकर्मा र अल्पसंख्यकबाट एमालेकै रामचन्द्र राई निर्वाचित भए । महिलातर्फ एमालेकी उदया शर्मा पौड्याल, दिलकुमारी थापा र कांग्रेसबाट धनकुमारी खतिवडा विजयी भएकी छन् । त्यस्तै खुलातर्फ एमालेका बलराम प्रसाद बाँस्कोटा, कांग्रेसका राधेश्याम अधिकारी र माओवादी केन्द्रका रामबहादुर थापा विजयी भएका छन् ।
प्रदेश ४ मा एमालेबाट गणेश तिमिल्सेना, शान्ति अधिकारी र दीपा गुरुङ विजयी भएका छन् । कांग्रेसबाट सुरेन्द्रराज पाण्डे, विन्दादेवी आले ९राना० र प्रकाश पन्थ विजयी भए । पन्थ निर्विरोध भएका हुन् । त्यस्तै माओवादीबाट दीनानाथ शर्मा, खिमकुमार विक निर्वाचित भए।
प्रदेश ५ मा एमालेका खिमलाल भट्टराई, कांग्रेसका दुर्गाप्रसाद भट्टराई, माओवादीबाट चन्द्रबहादुर खड्का निर्वाचित भएका छन् । त्यस्तै दलितबाट एमालेका रामलखन चमार र अल्पसंख्यकबाट माओवादीका राजकुमार कुँवर निर्वाचित भएका छन् । प्रदेश ५ मा एमालेकी कोमल वली, मीना बुढा र कांग्रेसकी अनिता देवकोटा निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् ।
प्रदेश ६ मा एमालेबाट नरपति लुवार, कविता बोगटी र नन्दा शर्मा चपाईं विजयी भएका छन् । त्यस्तै, माओवादी केन्द्रबाट जीवन बुढा र युटोल तामाङ विजयी भए ।
त्यस्तै प्रदेश ७ मा एमालेका चक्रप्रसाद सुवेदी र माओवादी केन्द्रका महेशकुमार महरा विजयी भएका छन् भने एमालेका शेर बहादुर कुँवर, इन्दु कडरिया, कमलाकुमारी ओली, कांग्रेसका बद्रीप्रसाद पाण्डे, तारादेवी भट्ट, माओवादीका हरिराम चौधरी निर्विरोध भएका छन् । निर्वाचित सबैलाई बुधबार साँझ नै प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत जयानन्द पाण्डेले जानकारी दिए ।
धनकुटा तनावग्रस्तः आन्दोलनकारीले क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा गरे आगजनी
एमालेका नेता कार्यकर्ता आक्रोशित, शीर्ष नेताबीच गम्भीर छलफल, पार्टी एकता नहुने संकेत
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग गच्छदारलाई समेत बोलाएर ‘बयान लिने’ निष्कर्षमा
निदान अस्पतालका सीईओसहित ५ जना पक्राउ, फिल्मी शैलीमा मृगौलाको यसरी हुन्छ किनबेच
प्रधानमन्त्री देउवा भाषण गरिरहेको अगाडि नै शक्तिशाली बम बिष्फोट, अबस्था तनाब ग्रस्त
लोकमान, चुडामणीपछि कुन कुन भ्रष्ट, दलाल, घुसखोरहरु छन् बिप्लवको टार्गेटमा (नाम सहित)